_L। ए गोप्य_ जेम्स एलोरो क्लासिक फिल्म को २० बर्ष वर्तमान साहित्य
यी दिनहरु Nd२ औं संस्करण को कान फिल्म महोत्सव त्यो भोली समाप्त हुन्छ। खैर, त्यो मा 20 वर्ष पहिले को को फिल्म अनुकूलन ला गोप्यसबैभन्दा प्रसिद्ध र प्रशंसित उपन्यासको शीर्षक जेम्स ellroy। निर्देशित कर्टिस हान्सन (गत सेप्टेम्बरमा मरे)
El रबीड कुकुर प्रकाशित ला गोप्य en 1990 र तिनीहरूले सिनेमामा धेरै कामहरू अनुकूलन गरेका छन्। म, जसले एल्लोको बारेमा प्रायः सबै कुरा पढेका छन्, यो मेरो बेडसाइड उपन्यासहरूमा छ। र चलचित्रबाट म केवल भन्न सक्छु कि मलाई लाग्छ राम्रो अनुकूलन सम्भव छ र समकालीन फिल्म noir को मास्टरपिस। दुबैको समीक्षा अर्को हो वितरण विशेष को अनुहारहरू कि तिनीहरूले हाम्रो साहित्यिक पुलिसहरूमा हालेका छन्। यी संग तिनीहरूले यो पूर्ण रूपमा सही भयो। सबैमा।
1 लस एन्जलस क्वार्टेट
2 ला गोप्य
लस एन्जलस क्वार्टेट
ला गोप्य छ तेस्रो शीर्षक तथाकथित लस एन्जलस क्वार्टेटको, बाट बनेको कालो दहलिया, महान मरुभूमि, ला गोप्य y सेतो ज्याज। अन्तिम तीनलेaको योजना अनुसरण गर्दछ मुख्य पात्रहरूको त्रिक यस लेखक को धेरै सामान्य।
तिनीहरू सबै आफ्नो छ जटिलता संरचना र पढाइ दुबैमा, म प्रायः भन्ने गर्छु ला गोप्य सबैभन्दा बढी हो। तर उनीहरू किन पढ्न मनमोहक छन्। त्यसको लागि र उसको लागि टेलिग्राफिक र सशक्त शैली, नाजुक पेट वा राजनैतिक रूपमा सही आत्माहरूको लागि उपयुक्त छैन।
लस एन्जलस, १ 50 XNUMX ० को दशक। अमेरिकी सपना सँगसँगै छ अश्लील साहित्य, ला पुलिस भ्रष्टाचार र षडयन्त्र शहर को अंडरवर्ल्ड मा। A जघन्य सामूहिक हत्या LAPD मा सबै अलार्म सेट गर्दछ। त्यहाँ को जीवन तीन प्रहरी त्यो अरु भन्दा फरक हुन सक्दैन। उनीहरूले शुरू गरेको अनुसन्धानले उनीहरूलाई एक वर्गमा राख्छ जाल भूलभुलैया बाहिरी भन्दा धेरै भित्र छ र, तिनीहरूमा। र नतिजा सबैभन्दा खराब हुन सक्छ।
तिनीहरू असंख्य छन्। काल्पनिकसँग, यो वास्तविक, LAPD को पौराणिक टाउको को रूप मा, विलियम एच पार्कर, वा गिरोहहरू ज्याक ड्र्याग्ना वा मिकी कोहेन। तर हेरौं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण।
एड एक्स्ले (केटा पियर्स)। महत्वाकांक्षी र को लागी तिर्खा महिमा, यो पुग्न छ कुनै पनि कानून तोड्न सक्षम। उसले आफ्नो बुबा, प्रतिष्ठित पूर्व प्रहरी र महान टाइकुनलाई पनि छोड्ने विचार गर्यो जसले मरे। यो एउटा विजेता जन्म र जे पनि लागतमा तपाईले चाहानुहुन्छ प्राप्त गर्नुहोस्।
ज्याक भिसेनेस (केविन स्पेसी)। अर्को महत्त्वकांक्षाको एक उदाहरण, त्यो फमा। यो एक जस्तै बढी महसुस गर्दछ सेलिब्रेटी, एक प्रसिद्ध टेलिभिजन श्रृंखला को सल्लाहकार हो (आदर प्लेक) पुलिसको बारेमा र छैन कुनै स्क्रपल्स छैन ट्याबलोइड म्यागजिनहरूमा जानकारी पठाउन। तर ऊ पनि आफ्ना षडयन्त्रहरूमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने षड्यन्त्रले घिसार्नेछ। ढिलो भए पनि।
बड व्हाइट (रसल क्रो)। सबै भन्दा पहिलेको भन्दा फरक। यो उनको आमाको क्रूर मृत्युले चिन्ह लगाएको छ, जुन उसले बच्चाको रूपमा देख्यो, र एउटा विशेष छ दुरुपयोग गर्नेहरु संग जुनूनी महिलाको। त्यसो भए हिंसात्मक कोमो निराश यसको धेरै प्रकृतिबाट, यद्यपि यो आफैलाई एक को रूपमा प्रकट गर्दछ राम्रो अन्वेषक, जो दुबै अनुसन्धान र कार्यमा अगाडि छ। यसले आफ्नो सीपको लागि ठूलो मूल्य तिर्दछ, तर यसलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइन्छ।
डडले स्मिथ (जेम्स क्रोमवेल)। क्याप्टेन स्मिथ, उपन्यासमा राउन्ड रुडि आयरिशम्यान भनेर वर्णन गरिएको हो, त्यो चरित्र हो सम्पूर्ण चौरमा जडान गर्नुहोस्। एउटा सबै भन्दा राम्रो सबैको Ellroy द्वारा बनाईएको, अस्तित्वको लागि जुन उहाँको प्रमाणित गर्दछ शैतानी प्रकृति। को सही उदाहरण ठूला Baddies साहित्यिक तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न प्रशंसा गर्न।
लिन ब्रेकन (किम बासिingerर)। इल्लोरोईको काममा महिला पात्रहरू थोरै छन्, तर तिनीहरूसँग छन् धेरै शक्ति र भावनात्मक चार्ज। यदि तिनीहरू पुरुष पात्रहरूको जुनून होइन भने, तिनीहरू कार्यको लगाम लिन्छन् वा यसमा निर्णायक हुन्छन्। को सुरुचिपूर्ण लक्जरी वेश्या जुन नक्कल भेरोनिका ताल मात्र एक हो साधारण केटी केवल महत्वाकांक्षा संग मान्छे को। त्यसोभए, यो विरोधाभास होइन कि ऊ त्यो मानिससँगै रहन्छ जसले गौरव पनि खोज्दैन।
त्यो कस्तो रह्यो सिनेमाटोग्राफिक भाषामा विकास गर्न असम्भव अत्यधिक जटिल र विस्तृत प्लट, पटकथा लेखक ब्रायन हेल्जल्यान्ड र निर्देशक कर्टिस हान्सन तिनीहरूले एक बनायो ईन्जिनियरिंग काम जो भाग्यवश उनीहरुको लागी राम्रो लाग्यो। धेरै राम्रो छ कि उनीहरूले ओस्करलाई जित्यो एक बर्ष पछि उत्तम अनुकूलित पटकथा। तर सबै भन्दा माथि तिनीहरूले पायो सार राख्नुहोस् मूल को। तिनीहरू पनि जम्मा गर्न सफल शानदार सेटिंग, साउंडट्र्याक र फोटोग्राफी। र तिनीहरूलेaको छनौट गरेर काम समाप्त गरे कोरल कास्ट अनुग्रहको अवस्थामा.
सफलता: ताराहरूको नामको साथ राम्रो अंकुश राख्नुहोस् Spacey y बेसिंगर (जुन पनि जीते ऑस्करaसबै भन्दा राम्रो सहयोगी अभिनेत्री)। तिनीहरू जस्तै केही फेन्सी माध्यमिक द्वारा सामेल थिए Cromwell (क्याप्टन स्मिथ जस्तै अपवाद, यद्यपि उनका शरीरको साहित्यिक स्मिथ अनुरूप छैन) र तिनीहरूले त्यो हासिल गरे दुई अज्ञात अनुहारहरू (पियर्स y Crowe) असर गर्दछ ठ्याक्कै किनभने तिनीहरू पहिलेका सन्दर्भहरूसँग सम्बन्धित हुन सक्दैन, यसैले तिनीहरू ती पात्रहरू भए.
परिणाम: के यदि कसैले यो अहिले सम्म देखेको छैन भने, यसले समय लिन हुँदैछ यो पढ्ने बित्तिकै। हामी मध्येका सबैले यसलाई देखेका छौं, मानौं यी २० बर्षहरूमा करिब २० करोड पटक र हामी यो कुराकानी हृदयले थाहा पाएका छौं (र अ in्ग्रेजीमा) किनभने एकपटक फेरि यसले फरक पार्दैन।
ला कन्फिडेन्शिअलको बारेमा अधिक यहाँ.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » _L। ए गोप्य_ जेम्स एलोरो क्लासिक चलचित्रको २० बर्ष
शानदार फिल्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गरियो, शानदार कास्ट। २० बर्ष भइसक्यो !!! म उसलाई देखेर थकित हुँदैन
म तिमीलाई के भन्न सक्छु? कि म पनि थाकेको छैन ...
मारियोला, तपाई मेरो जीवनको हिस्सा हो कि यो फिल्म को लागी यस्तो उत्कृष्ट श्रद्धांजलि बनाउन सकेको छैन। तपाईले मलाई हेर्नु भएकोमा मर्नु भयो, र त्यो ... म यसलाई हृदय देखि जान्छु। राउन्ड लेख, राउन्ड चलचित्र, राउण्ड अनुकूलन, राउन्ड एक्टरहरू र असफल ब्यक्ति Ellroy।
ठीक छ, म पनि त्यस्तै भन्छु। तपाईले थाहा पाउनुहुने छैन हामी एक हजार पटक बोले पछि? तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद।
यो उही लेखकको ब्ल्याक डहलिया हो, भव्य चलचित्रहरू र धेरै राम्रो उपन्यास, मैले दुबैलाई १० बाहिर १० लाई सिफारिस गरेको छु।
हो पनि। तपाइँसँग ला दलिया नेग्राको सन्दर्भ पनि छ, तर मेरो लागि ब्रायन डी पाल्माको फिल्म आउन धेरै लामो समय सम्म रह्यो। म पुस्तक धेरै मन पर्छ।